Nhau - Pfupisa maitiro ekushanda uye matanho ekuchengetedza esimbi chip cake muchina
Pfupisa maitiro ekushanda uye kungwarira kwesimbi chip cake muchina
Metal shavingsimhando yemarara inogadzirwa mushure mekugadzirisa zvigadzirwa zvesimbi kana zvikamu. Ndiyo yakasvibiswa yekugadzirwa kwesimbi yepamusoro. Zvisinei, inoda kutonhora-yakamanikidzwa nesimbi shavings cake machine. Nokuti vanhu vazhinji havazivi maitiro ekushanda kwemidziyo, kushanda uye kushandiswa kwekushandisa Pachava nekukanganisa kwakasiyana-siyana uye matambudziko mukugadzirisa. Pazasi isu tichakutungamirira iwe kuti unzwisise: maitiro ekushanda uye zvidziviriro zvesimbi chip cake machine.
Iyo nzira yekutsikirira simbi machipisi mumakeke inzira yekutsikirira inotonhora uye extrusion. Munguva ye extrusion process, hapana chikonzero chekupisa kana kuwedzera binder. Zvakakosha kusarudza taifanira kutsigira midziyo zvichienderana nekukura uye chimiro chezvimedu zvesimbi. Kana zvimedu zvesimbi zviri zvimedu zvehukuru hwakafanana, zvimedu zvesimbi zvinogona kudyirwa zvakananga muhopi yemuchina wesimbi scrap cake kuburikidza nemutakuri, uye zvimedu zvesimbi zvakaenzanirana kuburikidza nenzira yekudyisa Iyo inozadza mold uye inoidzvanya kuita. high-density cake block necylinder yekugadzira, uye ipapo keke block inoderedzwa ne cylinder yekudzikisa uye inosundirwa kunze kwe.midziyo.
Kana simbi shavings yakareba kana yakakura, zvinodikanwa kupfuudza crusher kupwanya simbi shavings kuita particle-size particles, wobva wadzvanya muchimiro zvinoenderana nematanho ari pamusoro. Sezvo zvimedu zvesimbi zvakakandwa kure, zviri nyore kugovera zvisina kuenzana kana kuvhara mold panguva yekugovera. Isu tinokwanisa kuisa yekumanikidza-feed screw conveyor mudziyo pamushini wesimbi scrap cake, unogona kuvandudza zvakanyanya mashandiro uye kunaka kwemidziyo.
2. Chengetedzo yebasa remidziyo
1. Metal shavingsyezvinhu zvakasiyana-siyana uye mamakisi zvinofanirwa kudzvanywa zvakasiyana. Hazvigoni kusanganiswa pamwe chete uye kumutswa. Izvi hazvizongovandudza hutano hwemakeke akaumbwa, asiwo kuwedzera hupenyu hwebasa remidziyo;
2. Metal shavings inofanira kucheneswa isati yatsikirira, kunyanya jecha, mavheiri, nezvimwewo hazvifaniri kusanganiswa mumatanda esimbi;
3. Panyaya yezvimedu zvesimbi zvine mafuta, tsvina yemafuta inofanira kucheneswa uye kubviswa kuti irege kukanganisa kunaka kwekiki yakagadzirwa;
4. Kudzvinyirirwa kwakasiyana kunofanira kusarudzwa kune simbi chip cake muchina kudzvinyirira simbi machipisi nekusachena kwakasiyana. Paunenge uchigadzirisa kudzvinyirira, inofanira kugadziriswa maererano nezvinodiwa nemugadziri, uye haigoni kugadziriswa pakuda;
5. Munguva yekushanda kwesimbi crumb cake muchina, ngwariro inofanira kubhadharwa chero nguva. Ingave mudziyo une kudonha kweoiri kana kusagadzikana kudzvanywa, unofanirwa kugadziridzwa nenguva kudzivirira kuwedzera kwekukanganisa.
Usati watenga kana kugadzira, iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi mukunzwisisa uye kugona maitiro ekushanda uye nekuchengetedza kwesimbi chipping muchina. Paunenge uchishanda midziyo nemazvo, iwe unofanirwa kugara uchiteerera kushanda kwemidziyo. Panofanira kuva nenguva yekubata nzira yezviitiko zvakawanda zvisina kujairika.
Homemade Cardboard Baler, Leaf Compactor uye Baler, Aluminium Foil Baler Machine, Y81 Hydraulic Baler, Pop-Pamusoro Inogona Baler Equipment, Zvimedu Metal Compactor,